वर्षा र मनोज गजुरेल विवाह गर्दै भनेर समाचार आएपछि बोलीन् वर्षा, विबाह गर्ने खबर कसरी बाहिरियो ? – Gazabkonews
वर्षा र मनोज गजुरेल विवाह गर्दै भनेर समाचार आएपछि बोलीन् वर्षा, विबाह गर्ने खबर कसरी बाहिरियो ?
काठमाडौ । आइतवार केही समाचार प्रोटलहरुमा एउटा समाचार सार्वजनिक भयो । जसमा नायिका वर्षा सिवाकोटी र हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेलसंग सम्बन्धित थियो । मनोज गजुरेलले दोस्रो विवाह गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर केही समाचारहरुमा मनोज र वर्षा सिवाकोटीले विवाह गर्दै भन्दै समाचार सार्वजनिक भएपछि नायीका वर्षाले कडा प्रतिकृया दिएकी छन् ।
वर्षाले पनि विवाह गर्ने हल्ला चलेको थियो । उनले आफ्ना प्रेमी सार्वजनिक गरेको र उनैसंग विवाह गर्ने तयारी गरेको चर्चा चलेको थियो । तर केही अनलाईनहरुले वर्षा र मनोजलाई जोडेर विवाह गर्दै भनेर गलत अर्थ जाने समाचार बनाएपछि वर्षा रिसाएकी छन् ।
वर्षा सिवाकोटी र मनोज गजुरेल विवाह गर्दै भन्ने जस्तो समाचारहरु सामाजिक संजालमा फैलिएपछी वर्षा सिवाकोटीले सोमवार फेसबुक स्ट्याटस लेखेर आफ्नो रिसाएकी छन् । मनोज गजुरेलसंग विवाह गर्ने हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको र आफू दुईको बाटो नै फरक छ कसरी यस्तो हावादारी समाचार भाईरल बनाएको भन्दै रिसाएकी हुन् ।
समाचारमा भ्युज ल्याउनकै लागि आफ्नो अनावश्यक रुपमा मनोजसंग नाम जोडेको भन्दै उनी रिसाएकी हुन् । उनले भनेकी छन्, पत्रकार भन्दैमा पैसा कमाउन जे पनि लेख्ने ?
मनोज गजुरेल प्रति आफ्नो सधै सम्मान रहेको बताउँदै उनले गजुरेलसंग आफ्नो नाम जोडिने कुनै आधार नै नभएको उनको भनाई छ । कलाकार भन्दैमा जे पनि लेख्न र भन्न पाइन्छ भन्ने ‘मानसिक विक्षिप्तता’ बेलैमा हटाएको राम्रो भन्दै सुझाव समेत दिएकी छिन् ।
वर्षा सिवाकोटीको यस्तो छ स्ट्याटस
आदरणिय सर, मनोज गजुरेलको र मेरो बाटो अलग अलग छ । मेरो उहाँप्रति सम्मान सधै उचो नै रहेको छ । हामीलाई जोडेर कुप्रचार गर्दा कसको पो फाइदा होला र ? कलाकार भन्दैमा जे पनि लेख्न र भन्न पाइन्छ भन्ने ‘मानसिक विक्षिप्तता’ बेलैमा हटाएको राम्रो ।